Nanjavona ilay Keniàna Blaogera Sady Mpaka Sary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jona 2016 16:43 GMT
I Msingi Sasis, Keniàna blaogera sy mpaka sary an-dalambe. Sary avy amin'ny kaontiny Twitter.
Nanjavona ilay Keniàna blaogera sady mpaka sary an-dalambe, Msingi Sasis. Nosamborina tamin'ny taona lasa i Msingi raha naka sary tamin'ny alina tao amin'ny Toeram-pivarotana lehibe Galleria ao Nairobi. Notazonina tao amin'ny tobin'ny polisy tao Nairobi izy noho ny “fiahiahiana ho nanao asa fampihorohoroana”, ary nafahana madiodio avy eo.
Maro ny mediam-bahoaka nitatitra ny fisamborana azy. Na dia naka sary fotsiny aza no nataony, asa iray izay mahatonga ny fampahoriana ataon'ny polisy indraindray, lasa nalaza ho “ahiahiana ho mpampihorohoro” i Msingi taorian'izany.
Talohan'ny nanjavonany, nanoratra tao amin'ny pejy Facebook-ny izy tamin'ny 6 May mikasika ny fomba naharava ny asany sy ny antom-pivelomany noho ny fisamborana azy sy ny fametahana marika taminy ho ‘ahiahiana amin'ny asa fampihorohoroana':
Hatramin'ny nisamborana ahy toy ny ‘ahiahiana amin'ny asa fampihorohoroana’,herintaona lasa izay, nitsahatra ny fiainako ary lasa toy ny tsy an'asa aho.
Nanjary sarotra ho ahy ny mivarotra zavakanto na hahazo asa manan-danja satria tsy dia misy olona, na ny olon-tsotra na ny fikambanana, vonona ny hanao fampiraharahàna ara-bola na handray anjara miaraka amin'ny “olona iray ahiana ho mpampihorohoro’.
‘Ahiahiana ho mpampihorohoro’, izay no niainako tamin'iny taona iray lasa iny. Ny maha- ‘ahiahiana ho mpampihorohoro’ ahy dia midika fa tsy afaka ny hamelon-tena mihitsy aho. Ny tsy fahafahako mamelon-tena dia nidika fa tafalatsaka tamin'ny fitrosana sy nivangongoan'ny trosa maro aho.
Niaretako mangina sy samirery izany, hatramin'izao. Tsy maintsy manao veloma aho ho an'ireo olona rehetra izay efa nahita topi-maso sy aingam-panahy teo amin'ny asako.
Nisy vadintany naka [sic] ny zava-drehetra tao amin'ny studio-ko tamin'ity herinandro ity. Nalaina avokoa rehefa mety ho entana lafo vidy. Ny fakantsary, solosaina, fitaovana fanontàna sy fitaovana hafa, ary izay rehetra azo amidy haingana, anisan'izany ny “disaues durs” izay nisy ny asa rehetra noforoniko. Lasa daholo.
Tsy voaloako ihany koa ny hofan-tranoko nandritra ny volana maro ankehitriny, ary efa nahazo fampilazàna fandroahana aho izay efa dify ny fetra farany. Ny sisa tavela tsy nalain'ny vadintany toy ny akanjo, fanaka, sy ny zavatra manokana momba ny tena dia hotazonin'ilay tompontrano sy ny mpandraharahany mba hamerenana ny hofantrano tsy voaloa.
Ato anatin'ny ora vitsy, tsy hanan-kialofana aho .
Nakatoko koa ny Nairobi Noir. Mitady toerana ahafahako matory aho ankehitriny eny amin'ireo lalambe izay tsy maintsy nalehako nofantarina. Manantenana aho fa eny an-dalana eny dia mbola afaka hijoro indray. Izany ny fiainan'ny mpanakanto ‘ahiahiana ho manao asa fampihorohoroana’.
Nampiasa Twitter sy Facebook ny olona izay manaraka ny raharahany mba hanolotra fanampiana. Naneho hevitra ny mpiara-miasa aminy, Janice Kihanya:
tena malahelo aho. Ry vahoaka, fantatro manokana i Msingi sy ary mahatalanjona ny asany. Navoaka teto sy tany ivelany izany. Miaina anaty sehatra mitovy amiko izy ary ara-teknika izaho sy izy dia mitovy fandraharahàna, ary tso-po izy amin'ireo olom-patany. Azafady, raha misy olona afaka manampy azy, iangaviako mba ataovy izany. Notazonina nandritra ny fotoana maharitra izy satria naka sary imasom-bahoaka ary nogiazana ny fakantsariny.
Mohamed Haji dia nampifandray ny zava-nanjo an'i Msingi amin'ny ‘ady amin'ny fampihorohoroana’:
Tsy mitsahatra mihitsy ny alahelo eto amin'ny firenentsika. Izao no misy rehefa manjo antsika ny ady any ivelany lazaina fa ady amin'ny fampihorohoroana.
Niombona alahelo tamin'ny toe-draharahany ny mpanakanto Ralf Rafee:
Mpanakanto marani-tsaina sy manan-talenta iray hafa notapenam-bava. Satria ianjadian'ny fanenjeana sy ny tsindry faran'izay mafy vokatry ny asako ihany koa ny tenako, miombon-kevitra tanteraka amin'izay voalazany aho. Amin'izao fandehany izao, izay alehan'i Kenyà, tsy lavitra ahy koa ny fitsapàna toy izany. Msingi Sasis, na aiza na aiza misy anao ankehitriny, manantena aho fa ho tafavoaka amin'izany ianao!
Nandefa bitsika i Boniface Mwangi, Keniàna iray mpaka sary , fa nanjavona i Msingi:
Mitady azy ny fianakaviana, namana ary mpiara-miasa amin'i @MsingiSasis. Nangina izy taorian'ity lahatsoratra ity. Milazà vaovao ry Msingi
Nanontany izay azony atao mba hanampiana i Archer Mishale:
Really sad story of Msingi Sasis, the photographer behind @NairobiNoir. What can be done to help a brother? pic.twitter.com/IWLBkvls3e
Tantara tena mampalahelo ny an'i Msingi Sasis, ilay mpaka sary ao ambadiky ny @NairobiNoir. Inona no azontsika atao mba hanampiana rahalahy iray?
Tamin'ny famakiana ny lahatsoratr'i Msingi, nanoratra i Rand Pearson, tonian-dahatsoratry ny gazetiboky UP Nairobi ety anaty aterineto sady mpiara-miasa tamin'i Msingi, hoe:
Ny fampahoriana tsy ara-drariny, ny fanalàm-baràka ny anarany, ary ny fahaverezan'ny antom-pivelomana vokatr'izany nitambatra no nisy fiantraikany ara-pihetsehampo sy ara-batana. Nilaza tamin'ny olona akaiky azy i Msingi fa tena kivy izy ary manakaiky ny fetran'ny famonoan-tena, ka mahatonga ny fanjavonany ho manaitra bebe kokoa.
Saingy misy zavatra hafa asehon'ny fanjavonan'i Msingi, ary tsy fanehoankevitra iray momba ny kolikoly any amin'ny fitsarana na ny lahatsorany tamin'ny Facebook; fa ny toe-tsaina ananantsika ihany mikasika ny zavakanto, ny hatsaran-tarehy ary ny olona izay mamorona izany.
Mora ny mamintina ny zavatra niainako sy ny fandinihana nataoko amin'ny fanodinana ny UP Magazine, hoe indraindray i Kenyà dia mety ho ‘firenena tsy natao ho an'ny mpanakanto’ . Noho izany, ataon-dry zareo ao anatin'ny fahalàlana ny raho-mitatao aminy, ny fankasitrahana avy amin'izy ireo ihany, na ny loza mety hanjo azy ireo ihany izany.